Samba အားနည်းချက် Linux မှ
တီနာတိုလီဒို | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, ပရိုဂရမ်းမင်း, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
Samba သည်တိုက်ခိုက်သူအား ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းပယ်စေနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကအားနည်းချက်အတွက်ကြေညာခဲ့သည် Samba ၎င်းသည်တိုက်ခိုက်သူအား ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းပယ်စေနိုင်သည်။
ဆမ်ဘ ၎င်းသည်ဖိုင်မျှဝေခြင်း protocol ကိုဖွင့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသောအခမဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည် Microsoft က စနစ်များအဘို့ UNIX ဒီတော့ဒီနည်းနဲ့စနစ်တွေရှိတဲ့အသင်းတွေပါ GNU / Linux များ, MacOS o Unix က ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည် shared directory များကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Windows ကို.
ကောင်းပြီ, Youzhong yangeIra Cooper ဖြစ်သည် daemon အတွက် bug ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လေးနက်သောအားနည်းချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် smbd ချိတ်ဆက်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်သောအခါမှတ်ဉာဏ်ကိုမလွတ်စေခြင်းအားဖြင့်၊ သူတို့သည်မှားယွင်းသော authentication ကြောင့်မအောင်မြင်လျှင်ပင်။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ local network မှ attacker သည်ဤအားနည်းချက်ကို အသုံးချ၍ memory CPU ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် system's CPU ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဆက်သွယ်မှုတောင်းဆိုမှုအမြောက်အများကိုစင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အမည်မထုတ်ဖေါ်သော.
အဖြစ်ဖော်ထုတ်အဆိုပါအားနည်းချက် CVE-2012-0817၎င်းသည် Samba ဗားရှင်း ၃.၆.၀ မှ ၃.၆.၂ ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒါကြောင့်ဗားရှင်း 3.6.0 ကို download လုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်အပြင်အထက်တွင်ရှင်းပြထားသောအားနည်းချက်ကိုပြင်ပေးသောအခြားမူကွဲများအတွက်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ - http://www.samba.org/samba/security/
CVE-2012-0817 - Memory ယိုစိမ့်ခြင်း / ၀ န်ဆောင်မှုငြင်းပယ်ခြင်း
ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော Samba 3.6.3
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Samba အတွက်အားနည်းချက်
သတင်းအချက်အလက်ကောင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖတ်ပြီးတာက local network level မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ အသုံးပြုသူအသစ်များသည်နှိုးစက်မရှိတော့ပါ။ Linux သည်အလွန်လုံခြုံသည်။ အပြင်သူတို့ကပြီးသားကတညျ့ပါလိမ့်မယ်။
Firefox ကိုစမ်းသပ် 10
နောက်ဆုံးတွင် Gnome-Shell သည် Debian Testing တွင်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်